DKMG Soomaaliya oo sheegtay inay sugeyso ammaanka Muqdisho | goboladaradio.com	Thursday, May 23rd, 2013	Home
DKMG Soomaaliya oo sheegtay inay sugeyso ammaanka Muqdisho
Published on July 25, 2012 by admin · No Comments (Muqdisho GRN):-Xukuumada KMG Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadday in la xaqiijinayo ammaanka Magaalada Muqdisho oo la filayo in uu ka dhaco shirka Odayasha dhaqanka ee la doonayo in lagu ansixiyo Dastuurka Cusub.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka C/samad Macallin Max’ud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la xaqiijinayo ammaanka Magaalada Muqdisho islamarkaana la xaqiijinayo ammaanka Madasha uu ka dhacayo shirka la doonayo in lagu ansixiyo Dastuurka.
C/samad Macallin Max’ud waxa uu sheegay in Ciidamada Dowlaadda qeybahooda kala duwan iyo kuwa AMISOM ay ku howlan yihiin ammaanka iyo ka hortagga falal ammaan daro oo ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Hay’adda Nabad Sugidda gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in la xaqiijinayo ammaanka Magaalada Muqdisho gaar ahaan goobta uu ka dhacayo shirka la doonayo in lagu ansixiyo Dastuurka cusub ee Soomaaliya.
(Oct 26, 2012 Goboladaradio) Fagaaraha Weyn ee ku yaala Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ...	web analytics